🥇 ▷ Tijaabad - Pawarumi: toogashada lagu sameeyay Faransiiska oo ku taal Nintendo Switch ✅
Tijaabad – Pawarumi: toogashada lagu sameeyay Faransiiska oo ku taal Nintendo Switch
Taageerayaasha Shoot’Em Up way ku farxi doonaan. Soosaar 43 istuudiyaha Bordeaux ayaa hadda la sii daayay Pawarumi. Ciyaarta ayaa dhowaan laga heli karaa Dukaanka E-Dukaanka Nintendo Switch.
Pawarumi, waa goob wanaagsan oo loo yaqaan ‘Switch’?
Kahor intaadan gelin faahfaahinta ciyaarta, waa in la helaa. Kani waa toogasho kor u qaadis adduunyo mustaqbal leh. Ugu dambeyntiina ma ahan wax macquul ah, maxaa yeelay ciyaartan waxaa dhiirrigeliyay ilbaxnimadii hore ee Koonfurta Ameerika. Cayaaryahanku wuxuu soo saaray astaamo loo yaqaan Axo kaasoo muuqaal u ah fallaago isla markaana u dagaal galaya kaydka adduunyadiisa. Aboard Chukaru markabkiisa aadka u xoogga badan wuxuu doonayaa inuu cirib-tiro xumaanta.
Trinity ka fog neo?
Xitaa haddii markabku awood badan leeyahay, cadawga laftooda waa kuwa awood badan oo gaar ahaan aad u tiro badan. Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameeyo si loo noolaado iyo horumar. Qalabka wuxuu leeyahay seddex hub oo kala duwan:
Masaska (cagaarka): Waxay soosaaraa dhowr mashruuc oo isku mar ah isla mar ahaantaana ay u kala saaraysaa si ay u gaadho inta ugu badan ee ka soo horjeedda.
Condor (buluug): Wuxuu diraa laambad yar oo ah leysarka xoogga badan.
Jaguar (guduud): Waxay soo bandhigaysaa gantaalaha qumaatiga u kaca, laakiin kaliya aagga sawirka ee markabka hortiisa.
Pawarumi wuxuu ku saleysan yahay farsamooyinka ciyaarta ciyaarta xiisaha leh ee Trinity. Sida magacu u muujiyey midnimada saddex ayaa leh, taasi waa wanaagsan tahay, saddex hub baa jira. Cadawga kaladuwan sidoo kale waxay leeyihiin mid ka mid ah geesiyaasha sedexda hubka. Hadana waxay kuxirantahay hubka uu soo xushay ciyaartooydu saameyntu wey kala duwantahay. Midka ugu da’da weyn waxaad ku xasuusan doontaa Ikaruga oo ku saabsan Dreamcast kaasoo lahaa fikrad isku mid ah. Waa kuwan iskudhafyada kaladuwan:
Burbur (Cas> buluug> Cagaaran> Casaan): waa laban laabmayaa waxyeelada loo geysanaayo cadawga.
Kaanbayn (Dil isku midab ah): ayaa dib u soo nooleeya gaashaamadeeda, laakiin cadawga ay saameeyeen ayaa ka sii khatar badan.
Dheecaan (Casaan> Cagaaran> Buluug> Casaan): waxay u oggolaaneysaa inay buuxiso cabirka weerarka gaarka ah.
Weerar gaar ah
Ciyaar ka dhacday CAVE
Waa inaad si dhakhso leh ula qabsato oo aad kala duwanaato isticmaalka hubkaaga. Tallaalada kaladuwan waxay kuxiran yihiin badhan kale. Marka ciyaartoygu wuxuu ku weeraraa isweydaarsiga qaab sahlan oo dhakhso leh. Iyada oo ku xidhan xaaladda, wuxuu la qabanayaa istiraatiijiyadiisa. Intii lagu gudajiray fadhiyadayada ugu horreeya ee ciyaarta, waxaan xoogga saareynaa amniga annagoo sare u qaadna gaashaanka. Waxaan si dhakhso ah u ogaannay inaysan ahayn xigmad. Khibradda oo dhanna, waxaan soo qaadnay cabirka ciyaarta ciyaarta.
Saddex qaab oo adag ayaa la heli karaa: mid fudud, caadi ah oo adag. In kasta oo salka heerarka uu la mid yahay iyadoo kuxiran dhibka dhacdooyinka kaladuwan ayaa hadana waxaa sababaya ficilku xitaa mid aad u adag. Ma arki doontid muuqaal leh nabarro badan oo hiliblo ah. Sababta oo ah waxay u suurtoobi weyday in la riixo badhanka shaashadda sidaa darteed shaashadda ayaa la rakibay. Ciyaarta waxay ubaahantahay adkeysi iyo iscelin heer sare ah. Waqtiga qoraalka, maanaan guuleysan inaan dhammeysano qaabka adag. Laakiin si walba oo qunyar socod ah, waxaan dhejinay booska 16-aad ee sharafta leh “adduunka” markii aan ku dhajinay xaalad adag.
Xoog iyo sharaf …… ama maya
Pawarumi tixraaca toogashada on Switch?
Kooxda Bordeaux waxay ku guuleysteen afgambi de maître kulankoodii ugu horreeyay. Pawarumi waa ciyaar tayo leh. Sawiradu waa qurux badan yihiin, bay’adu waa mid midabbo leh oo kala duwan. Animationku kuma dhacayo wax qalad ah ha ahaato qaab reer guuraa ama telefishanka.
Qaylodhaanta ayaa sidoo kale si aad ah loo sameeyay. Muusiggu wuxuu ku dhegan yahay heerarka kala duwan. Tayada codka ayaa waliba iyaduna ah meesha ugu sarreysa. Ciyaarta ciyaarta ayaa ah basasha yaryar, markabku wuxuu ku jawaab celiyaa talaabada ugu yar ee ciyaaryahanka. Tani sidoo kale waa lama huraan ciyaarta noocan ah.
Khaladaadka kaliya ee aan canaanan karno ciyaarta waa in aysan jirin heerar tiro badan. Laakiin marka loo eego heerka dhibaatada, nasiino hubi inuu shaki kugu gelin doono.
Si loo soo gabagabeeyo, waxaan si aad ah ugu talineynaa ciyaartan. Kuwa jecel caashaqa filimkan kama shalaayi doonaan iibsigooda ka dibna waa ciyaar lagu ciyaaro France. Ciyaarta waxaa laga heli karaa E-Shop Nintendo Switch halkan qiimaha 19,99 €.